လားရိူးမြို့ အထက(၉)တွင် ကျောင်းသား (၅၀၀) နီးပါးခန့် အပြစ်ပေးအရိုက်ခံခဲ့ရ - APANNPYAY
Home / ပြည်တွင်းသတင်း / လားရိူးမြို့ အထက(၉)တွင် ကျောင်းသား (၅၀၀) နီးပါးခန့် အပြစ်ပေးအရိုက်ခံခဲ့ရ
လားရိူးမြို့ အထက(၉)တွင် ကျောင်းသား (၅၀၀) နီးပါးခန့် အပြစ်ပေးအရိုက်ခံခဲ့ရ
Apann Pyay 3:08 PM ပြည်တွင်းသတင်း Edit
ဇွန်လ ၁၅ရက်နေ့က လားရိူးမြို့ အထက(၉)တွင် ကျောင်းအုပ်
ဆရာမကြီး ဒေါ်နန်းချိုချိုမင်းမှ ကျောင်းသား(ယောက်ျား
လေး) (၅၀၀)ဦးခန့်အား အပြစ်ပေးသည့်အနေဖြင့် ဒုတိယ
တန်းမှစ၍ ဆယ်တန်း အထိ တစ်ယောက်တစ်ချက် ပြစ်
ခဲ့ရာ ဆရာမကြီးမှ .....
လွန်ခဲ့သည့်တစ်ပတ် နံနံပိုင်းတွင် ဆရာမကြီးမှကျောင်း
အငယ်တန်း ကလေးများအတွက်ထားရှိသော နေရာတွင်
ရှိသည့် ရေကန်ငယ်လေးများအတွင်းမှ အုတ်ကျိုးနှင့်ဗြုံး
များအား ဖယ်ရှား သန့်ရှင်းပြီးရေပြန်ဖြည့်ကာထားပေးခဲ့
လေးများအတွင်းမှ ရေများသည် အမြုတ်များဖြင့် ပြည့်နေ
သောကြောင့်ရိုးရိုးသားသား ထင်မှတ်ကာ ၎င်းကန်ငယ်
လေး အတွင်းမှ ရေများအား ပုံးဖြင့်ကိုယ်တိုင်ခပ်၍ သန့်
ရှင်းကာ လက်အားပြန်ဆေးပြီး ရေပြန်ဖြည့်ပေးခဲ့သည်...
နောက် ၂ ရက်အကြာ ၎င်းနေရာအားထပ်မံသွားရောက် ကြည့်ရှုရာ ဝါထိန်ပြီး အမြုတ်များထကာသုံးမရအောင်
ဖြစ်မှ သေးပေါက် ထည့်ခဲ့ကြကြောင်း ရိပ်စားမိခဲ့သည်.
အတန်းကြီး ကျောင်းသားများ ပါဝင်သော်လည်းမပြောရဲကြောင်း ကျောင်းသားကြီးများမှလည်း ဝန်ခံခြင်းမရှိ
သောကြောင့် ဒုတိယတန်းမှစ၍ဆယ်တန်း အထိကျောင်းသား များအား တစ်ယောက်တစ်ချက် နှုန်းဖြင့် ရိုက်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပါသည်.....
ကျောင်းသားများ အား အခုလို ရိုက်နှက်ပါကအပြင်တွင်
ပြန့်ကာ အလုပ်အား ထိခိုက်နိုင်သည်ကိုသိရှိပါသော်လည်း ဆရာမကြီးအနေဖြင့် ကျောင်းသားများ၏ အကျင့်နှင့်စာရိတ္တ အားယခုအချိန်မှ မပြင်လျှင် နောင်ပြင်ရန် မလွယ်သည့်အပြင် အမှားအား ဝန်မခံရဲသောဝစ်ိတ်အတွက် များစွာ ဝမ်းနည်းမိကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပါသည်။
ဇှနျလ ၁၅ရကျနကေ့ လားရိူးမွို့ အထက(၉)တှငျ ကြောငျးအုပျ
ဆရာမကွီး ဒျေါနနျးခြိုခြိုမငျးမှ ကြောငျးသား(ယောကျြား
လေး) (၅၀ဝ)ဦးခနျ့အား အပွဈပေးသညျ့အနဖွေငျ့ ဒုတိယ
တနျးမှစ၍ ဆယျတနျး အထိ တဈယောကျတဈခကျြ ပွဈ
ခဲ့ရာ ဆရာမကွီးမှ .....
လှနျခဲ့သညျ့တဈပတျ နံနံပိုငျးတှငျ ဆရာမကွီးမှကြောငျး
အငယျတနျး ကလေးမြားအတှကျထားရှိသော နရောတှငျ
ရှိသညျ့ ရကေနျငယျလေးမြားအတှငျးမှ အုတျကြိုးနှငျ့ဗွုံး
မြားအား ဖယျရှား သနျ့ရှငျးပွီးရပွေနျဖွညျ့ကာထားပေးခဲ့
လေးမြားအတှငျးမှ ရမြေားသညျ အမွုတျမြားဖွငျ့ ပွညျ့နေ
သောကွောငျ့ရိုးရိုးသားသား ထငျမှတျကာ ၎င်းငျးကနျငယျ
လေး အတှငျးမှ ရမြေားအား ပုံးဖွငျ့ကိုယျတိုငျခပျ၍ သနျ့
ရှငျးကာ လကျအားပွနျဆေးပွီး ရပွေနျဖွညျ့ပေးခဲ့သညျ...
နောကျ ၂ ရကျအကွာ ၎င်းငျးနရောအားထပျမံသှားရောကျ ကွညျ့ရှုရာ ဝါထိနျပွီး အမွုတျမြားထကာသုံးမရအောငျ
ဖွဈမှ သေးပေါကျ ထညျ့ခဲ့ကွကွောငျး ရိပျစားမိခဲ့သညျ.
အတနျးကွီး ကြောငျးသားမြား ပါဝငျသျောလညျးမပွောရဲကွောငျး ကြောငျးသားကွီးမြားမှလညျး ဝနျခံခွငျးမရှိ
သောကွောငျ့ ဒုတိယတနျးမှစ၍ဆယျတနျး အထိကြောငျးသား မြားအား တဈယောကျတဈခကျြ နှုနျးဖွငျ့ ရိုကျခဲ့ရခွငျးဖွဈကွောငျးရှငျးပွခဲ့ပါသညျ.....
ကြောငျးသားမြား အား အခုလို ရိုကျနှကျပါကအပွငျတှငျ
ပွနျ့ကာ အလုပျအား ထိခိုကျနိုငျသညျကိုသိရှိပါသျောလညျး ဆရာမကွီးအနဖွေငျ့ ကြောငျးသားမြား၏ အကငျြ့နှငျ့စာရိတ်တ အားယခုအခြိနျမှ မပွငျလြှငျ နောငျပွငျရနျ မလှယျသညျ့အပွငျ အမှားအား ဝနျမခံရဲသောဝဈိတျအတှကျ မြားစှာ ဝမျးနညျးမိကွောငျးရှငျးပွခဲ့ပါသညျ။